युक्रेनबाट फर्किएका मेडिकल विद्यार्थीलाई आफ्नो मुलुकमा पढ्न रुसको अफर, तर किन उत्साहित छैनन्? – Health Post Nepal
२०७९ असार २ गते ११:४१
काठमाडौं–रुसले युद्धका कारण युक्रेनबाट फिर्ता भएका भारतीय मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो मुलुकमा पढ्न अफर गरेको छ। तर पश्चिमी मुलुकले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण भारतीय विद्यार्थीहरु यो अफरबाट त्यति उत्साहित छैनन्
युक्रेनबाट फर्केका भारतीय विद्यार्थीहरु बढी भएको क्षेत्र केरलमा रुसी दूतावासका अधिकारीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसअघि गत मार्चमा पनि रुसले भारत सरकारसमक्ष यस्तै योजना प्रस्तुत गरेको थियो।
गत २४ फेब्रुअरीमा रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेयता करिब २२ हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनबाट फर्किएका छन्। उनीहरु सबैको पढाई अस्तव्यस्त भएको छ।
पश्चिमी युक्रेनका केही विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन् भने पूर्वी युक्रेन पूर्ण रुपले युुद्धको चपेटामा परेकाले अनलाइन कक्षा पनि सम्भव छैन। मेडिकल पढाइमा प्रयोगात्मक कक्षा महत्वपूर्ण भए पनि युद्धका कारण त्यो सम्भव देखिएको छैन।
रुसी दूतावासका अधिकारी बाबुस्किनले भनेका छन्, ‘यदि विद्यार्थीहरुले उनीहरुले चाहेको रुसी कलेजमा भर्ना पाउँछन् भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं। रुसको शिक्षा विभागको वेबसाइटमा यसबारे सबै जानकारी उपलब्ध छ। यो जानकारी दिल्ली, तिरुवन्तपुरम, कोलकाता, मुम्बई र चेन्नइस्थित रुसी केन्द्रमा पनि उपलब्ध छन्।’
प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने आशंका
रुसले आफ्नो कलेजमा भर्ना गर्न आग्रह गरे पनि विद्यार्थीहरु यसप्रति उत्साहित नहुनुको कारण हो–पश्चिमा मुलुकको रुसप्रतिको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो डिग्रीले मान्यता पाउँदैन कि भन्ने।
इवानो नेशनल मेडिकल युनिभर्सिटीमा चौथो वर्षका विद्यार्थी मुकुल चौधरी भन्छन्, ‘यदि रुसमा पढाई पूरा गरेपछि पोस्ट ग्राजुएट गर्न अमेरिका जाउँ भने त्यहाँ मेरो डिग्रीले मान्यता पाउँदैन, पढेर भारत फर्किएर यही नै जीवन व्यतित गर्न चाहदैनौं।’
उनका अनुसार रुसमा चासो नहुनुको अर्को कारण शुल्क पनि हो। युक्रेनको तुलनामा रुसमा मेडिकल शुल्क महंगो छ। चौधरीका अनुसार युक्रेनको विश्वविद्यालयमा औसत शुल्क वार्षिक ४ देखि ५ हजार डलर छ भने रुसमा यो शुल्क १२ हजार डलर छ।
तर रुसी केन्द्रका अधिकारीहरु विद्यार्थीहरुले युक्रेनजत्तिकै शुल्क भएका कलेज खोज्न रुसमा पनि पाउन सक्ने बताउँछन्।
किभ मेडिकल युनिभर्सिटीको शाखा पोल्याण्डमा पनि छ। विश्वविद्यालयले केही समयअघि अध्ययन अघि बढाउन चाहनेहरुले पोल्याण्ड शाखाबाट दुई महिनाको इन्टर्नशिप गर्न सक्ने बताएको थियो।
तर यो सुविधा सबै विद्यार्थीका लागि उपलब्ध छैन। भारतीय विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको इण्डियन मेडिकल काउन्सिलको नियम पनि हो। देशबाहिर पढाई गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो पढाईको पहिलो वर्ष नै काउन्सिलाई यसबारे सूचना दिनुपर्ने हुन्छ।
रुस र चीनमा मेडिकल पढाई पूरा गरेपछि हरेक विद्यार्थीले भारत फर्किएर काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्नेहुन्छ। यसपछि मात्र उनीहरुको पढाईको मान्यता हुन्छ र पश्चिमा मुलुकले पनि मान्यता दिन्छन्।
यसअलावा अर्को पनि नियम छ–जुन कलेजमा पढाई सुरु गरिएको छ, सोही कलेजबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले रुसको अफरमा यो नियम पनि अवरोधको रुपमा रहेको बताइएको छ।
युक्रेनबाट फर्किएका मेडिकल विद्यार्थीले केही समयअघि केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग भेट गरी भारतका मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सबै सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना मागमा मौन रहेको उनीहरुको आरोप छ।
विद्यार्थीहरुको रुसप्रतिको अरुचीको अर्को कारण हो भाषा। चौथो वर्षका विद्यार्थीहरुले बिरामीसँग युक्रेनी भाषामा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसअघि सहज थियो। तर रुस गएपछि रुसी भाषा अवरोधका रुपमा आउन सक्छ। उनीहरु भन्छन्, ‘अचानक नयाँ भाषा कसरी सिक्न सकिन्छ र? त्यसमाथि हामीले कम शुल्कका कारण युक्रेनको पढाई रोजेका थियौं।’
यद्यपि आगामी सेमेस्टर सेप्टेम्बरमा सुरु हुनुअघि नै स्थित सुध्रने आशामा विद्यार्थीहरु छन्।